Guyyaa Har’aa Magaalaa Perth, Western Australia Keessatti Maaltu Uumame? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGuyyaa Har’aa Magaalaa Perth, Western Australia Keessatti Maaltu Uumame?
Guyyaa Har’aa Magaalaa Perth, Western Australia Keessatti Maaltu Uumame?
Dhaabbanni “Africa Down Under” kan jedhamu, waggaa waggaan, ‘conference’ as magaalaa Perth keessatti waa’ee albuudaa gara garaa fi bobaa’aa biyyoota Afrikaa keessa jiran irratti inveestaroonni Australia akka dhaqanii ‘invest’ godhaniif conference qopheessa.
Kanaaf ‘Ambassador Australia,’ Ing. Takele Uma Banti
gara Australia dhufee akka ‘conference’ kana’rratti hirmaatuf aferraa godhaniifii akka turan, fuula fb isaa’rraa argannee turre (suuraa barreeffama kanaa wajjiin maxxanfame, isa tokkoffa’rra jiru ilaalaa).
Waldaan Hawwaasa Oromoo magaalaa Perth, Western Australia keessa jiraannu, waan kana dhageenyee, akkamittiin sagantaa warra dhiiga ilmaan keenyaa dhugaa jiran kana fashaleessuuf, akkuma kana, daba dhoksaan Itiyoophiyaa keessatti, ilmaan Oromoo’rratti gochaa jiran akka saaxilluuf teenyee irratti marii’anne.
Sagantaa kana irratti hirmaachuuf, nama tokkof gatiin ‘ticket’ seensaa $1500 baafnee, dargaggoota keenya heedduminaan conference sana keessa gashuuf murteeffanne.
PPn ijoollee keenya fixaa, angaa’ota siyaasaa keenya hidhaatti dararaa, biyya alaa dhuftee nagaan ‘conference’ kam irratti, akka hin hirmaanneef, qeerroon magaalaa Perth, waadaa waliif seenne.
Akkuma waadaa keenyaa, Takalaa qaaneessuuf galma ‘conference’ sanaa baay’annee seenne. Ganama biyyoota ‘West Africatu’ albuuda biyyasaanii keessa jiru inveestarootaaf dhi’eesse. Kan Itiyoophiyaa sa’a booddee ture. Kanaaf, sagantaan Takalaaf qabame, sa’a booddee, Sa’aatii 3:45WB ture (suuraa barreeffama kanaa wajjiin maxxanfame, isa lammaffaa’rra jiru ilaalaa). Yeroo laaqana nyaannee gara galmaatti ol-deebinu, Takalaan sagantaa isaa haquusaa dhageenye.
Akkuma kana, ‘Ambassador’ Itiyoophiyaa kan biyya kanaa, argamuu akka hin dandeenye dhageenye. Yeroo qopheessitoota sagantichaa gaafannu, ‘Ambassador’ Itiyoophiyaa, dhufuu akka hin dandeenye nuuf dhamanii jedhan, itti dabaluun, ‘video conference’ gochuus akka hin dandeenya nuuf himanii jiru, nuun jedhan.
Egaa akka kanaan Takalaa Uumaa fi Ambassador Itiyoophiyaa, sodaatanii sagantaa itti inveestaroota Australia sobuuf turan haquusaanii hubachuu dandeenyee jirra. PPn ijoollee keenya ajjeesaa, angaa’ota sayaasaa keenya mana hidhaatti dararaa, nagaadhaan biyya alaa dhuftee, waan tokko hojjachuu akka hin dandeenye barsiifnee jirra.
Guyyaa har’aa Qeerroon magaalaa Perth, injjifannoo guddaadhaan sagantaa kenya goolabnee gara mana keenyaatti gallee jirra.
Oduu Gaddaa! Obbo Gaaromsaa Ichimaa Abbaan Galaanaa Gaaromsaa fi Caalaa Gaaromsaa Du’aan Addunyaa Kana Irraa Boqataniiru.